Jailbroken iPhone uru ndị ị a otutu. Ị nwere ike ibudata a ụwa nke ngwa ọdịnala nke bụ adịghị na Apple App Store, ịnweta iOS usoro, ma na-agbanwe wireless na enye. Otú ọ dị, e nwere otu ihe ị na-eche ihu: mgbe ọ bụla ị mkpa iji weghachi gị iPhone, na jailbreak atụmatụ ga-efu. Otú ọ dị, TT bụ ike ghara ihichapụ iPhone data ọ bụrụ na ị nwere nza nke onye ozi na gị iPhone. Echegbula onwe gị banyere ya. E nwere ndị ka ọrụ gburugburu ka ihichapụ iPhone data enweghị adịkwa jailbreak Lelee na-esonụ 3 mfe ụzọ ka ihichapụ iPhone (akwado iOS 9) data enweghị adịkwa jailbreak.
Ngwọta 1: Otu click ihichapu gị iPhone data enweghị adịkwa jailbreak (ike-atụ aro)
Ngwọta 2: Hichapụ gị iPhone data enweghị adịkwa jailbreak (Nani maka iOS 5.0-6.1.2)
Ngwọta 3: Hichapụ iPhone data enweghị adịkwa jailbreak (-eji ihe iPhone ngwa)
Ngwọta 1: Otu click ihichapu gị iPhone data enweghị adịkwa jailbreak
Ị na-adịghị na-tech-savvy mara otú ihichapu data on a jailbroken iPhone. Nanị chọrọ n'ihi na ị bụ ịhọrọ ezi ngwá ọrụ na-eme ọrụ maka gị. Wondershare SafeEraser ma ọ bụ Wondershare SafeEraser maka Mac-enyere gị aka ihichapu junk faịlụ, onwe data ma ọ bụ niile data na gị jailbroken iPhone enweghị adịkwa jailbreak. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPhone 6s (Plus), 6 (Plus), 5S, iPhone 5C, iPhone 5, na iPhone 4S na-agba ọsọ ndị ọhụrụ iOS 9. Ị nwere ike ibudata ya na nwere a-agbalị. N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ ihichapu iPhone data a usoro.
Download nri version nke Wondershare SafeEraser maka kọmputa gị. Ẹkedori ya na jikọọ na kọmputa gị na gị iPhone site na eriri USB.
Nzọụkwụ 2 ihichapu iPhone data enweghị adịkwa jailbreak
Ke akpan window, niile atụmatụ maka ngwá ọrụ a na-depụtara. Ị nwere ike iji ya ihichapu junk faịlụ, onwe data, ehichapụ faịlụ ma ọ bụ ọbụna ndị niile data na gị iPhone. Na-ahọrọ nri atụmatụ gị mkpa.
1-Pịa nzacha na mkpocha: ọcha junk faịlụ, dị ka log faịlụ, foto / video cache, iTunes syncing cache, download temp faịlụ, ngwa cache, ngwa kuki, ngwa temp faịlụ na ndị ọzọ.
Ihichapu Private Data: safari cache, safari akụkọ ihe mere eme, safari kuki, keyboard cache, ozi, ozi Mgbakwụnye, na-akpọ ihe mere eme, ndetu, foto, wdg
Ihichapu ehichapụ faịlụ: ozi, iMessage, kọntaktị, na-akpọ ihe mere eme, FaceTime, kalenda, ncheta, ndetu, safari ibe edokọbara, photos, videos na na.
Ihichapu All Data: ihichapu niile data na gị iPhone, mwube ya dị ka a ọhụrụ ekwentị
A ngwọta dabeere na ọkara Weghachi, na ọ bụ naanị maka iOS 5.0-6.1.2. Ọ bụrụ na ị na-eji ndị ọzọ iOS nsụgharị, biko adịghị eso nke a ndu. Ị nwere ike ibudata ya site na ịpị njikọ nyere n'ihu.
Nzọụkwụ 1. unzip ngwugwu na ị na ibudatara na-agba ọsọ ahụ exe faịlụ ugbu a na ya.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na kọmputa na-eche maka oge, ruo mgbe usoro ihe omume na-achọpụta rụọ ya.
Nzọụkwụ 3. Pịa na bọtịnụ na nri nke ọganihu mmanya na-arụ ọrụ na-esonụ nkọwa.
Nzọụkwụ 4. n'oge usoro, gị iPhone ga-reboot ole na ole nke ugboro. Mgbe ọ bụ zuru ezu, ị nwere ike nweta a dị ọcha iPhone na-enweghị data, ma a na-emebibeghị jailbroken iOS.
Ngwọta 3: Hichapụ iPhone data enweghị adịkwa jailbreak (naanị n'ihi na ihe jailbroken iPhone)
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ngwa na-arụ ọrụ na gị iPhone, i nwere ike ịgbalị iLEX oke, nke nwere ike ibudatara na Cydia ụlọ ahịa. Ihe i kwesịrị ịma bụ na a na-eji ngwa pụrụ inye aka ehichapụ niile data ma ngwaahịa ngwa ọdịnala na data gị jailbroken iPhone, ma ọ na-gị jailbreak mbụ. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe dị gị mkpa, biko ịga n'ihu.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye iLEX oke na gị iPhone si Cydia ụlọ ahịa.
Nzọụkwụ 2. Mgbe ahụ ị mkpa ịchọta ma wụnye MobileTerminal na gị iPhone, na-achọ ya na Cydia ụlọ ahịa.
Nzọụkwụ 3. respring gị iPhone na-agba ọsọ MobileTerminal.
Nzọụkwụ 4. Ụdị oke na iwu ebe. Mgbe ahụ a ogologo ndepụta nhọrọ ga-ọkọnọ. Ka ihichapụ gị iPhone data, ị nwere ike họrọ nhọrọ 12.
Nzọụkwụ 5. Kwenye gị oke site na ịpị EE mgbe ngwá ọrụ jụrụ n'ihi na gị nkwenye.
Nzọụkwụ 6. Chere maka usoro rụchaa, na reboot gị iPhone Mgbe kpaliri ime otú ahụ.
Mgbe gị iPhone bụ reboot, fọrọ nke nta niile na ọ e ehichapụ ma e wezụga ndị iLEX oke na ngwaahịa ngwa.
> Resource> ihichapu> 3 Ụzọ iji Hichapụ iPhone Data-enweghị adịkwa Jailbreak